Indlu enendawo yokuphola engaselwandle e-OceanHaus kwi-Space Coast - I-Airbnb
Indlu enendawo yokuphola engaselwandle e-OceanHaus kwi-Space Coast
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguMiriam
Indlu engaselwandle enamagumbi ayi-5 neendawo ezisetyenziswa ngumntu wonke ezilungele intsapho okanye abahlobo, iholide okanye ukuphumla. Le ndlu ilala abantu abafikelela kwabayi-12 ibe unokuya ngqo elwandle.
I-OceanHaus inekhitshi elikhulu kakhulu elidityaniswe negumbi lokutyela, igumbi lokuhlala elinendawo yokubasa umlilo kunye neveranda enendawo yokoja kunye nendawo yokutyela phandle. Iyadi engasemva ijongene namanzi aluhlaza oLwandlekazi lweAtlantiki kunye nolwandle olunentlabathi emhlophe.
Ungangena nakwindawo yokujonga i-rock ngokuthe ngqo emva kwendlu!
I-OceanHaus yindlu enamabali amabini eyi-3,900 sqf enomda we-100 ft weAtlantic Ocean eIndialantic, eBrevard County. Indlu inamagumbi okulala ayi-5 namagumbi okuhlambela ayi-3; ilala abantu abafikelela kwabayi-12: i-master suite phezulu (ilala abantu abayi-2+1) + igumbi lokuhlambela, i-master suite ezantsi (ilala abantu abayi-2 +1) kunye namagumbi okuhlambela ayi-3 alala abantu ababini ezantsi (+1 igumbi lokuhlambela). Le ndlu inekhitshi elihle elidityaniswe negumbi lokutyela, igumbi lokuhlala elinendawo yokubasa umlilo neveranda enendawo yokutyela phandle.
Le ndlu inegaraji yeemoto eziyi-2, itshaja yeemoto zeTesla, iyadi enkulu yangaphambili elungele ukudlala imidlalo kunye neyadi engasemva ejongene namanzi aluhlaza oLwandlekazi lweAtlantiki kunye nolwandle olunentlabathi emhlophe.
Ukuhonjiswa kwale ndlu ngaselunxwemeni kukhuthazwa ngamanzi aluhlaza oLwandlekazi lweAtlantiki kunye neegadi eziluhlaza.
I-OceanHaus inazo zonke izinto eziyimfuneko kunye nezinto onokuzisebenzisa ukuze wonwabele iholide elunxwemeni: iibhodi zokutyibiliza emazeni, iibhodi zokutyibiliza emanzini, ii-kayaks, izitulo zaselwandle, iitawuli zaselwandle, zonke izinto ezibalulekileyo zokupheka, izitulo eziphezulu, imidlalo yebhodi, ilayibrari encinci eneencwadi ezintle zaselwandle, ibhedi yosana kunye nesitulo sokutyisela usana.
Le ndlu ineTV eziyi-4 eziphucukileyo kunye nezithethi zomculo zeSonos kumgangatho omabini - ungangena kwiinkonzo ozithandayo zokusasaza isandi neevidiyo kunye nee-akhawunti zakho-; indawo yokuhlamba iimpahla inomatshini wokuhlamba nowokomisa impahla kunye neayini; ekugqibeleni, ikhitshi elinento yonke liquka i-microwave, ioveni, umatshini wokuhlamba izitya, umatshini we-Miele gourmet espresso, umatshini wokwenza ikofu we-Keurig, i-blender kunye nazo zonke izinto zasekhitshini ezifanelekileyo zabapheki abatyeleleyo.
I-Indialantic yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla elwandle. Qala usuku lwakho ngokuhamba okanye ubaleke elunxwemeni ngelixa ubona ukuphuma kwelanga. Ungonwabela isidlo sakusasa esipheleleyo endlwini okanye uye nabantu balapha kwivenkile yekofu yeBlueberry Muffin ukuze ufumane i-muffin ekhethekileyo yosuku. Chitha intsasa elunxwemeni usenza imisebenzi eyonwabisayo efana nokuloba, ukusefa kwikhayithi, ukusefa, ukudada, ukukhwela inqanawa, ukukhwela inqanawa, okanye ukuphumla nje kwaye wonwabe nelanga. Emva kwesidlo sasemini esimnandi kunye nokulala kwizitulo zokuphumla egadini, unokuhamba ngaselwandle ukuya kwi-Starbucks ekufutshane okanye kwi-Cold Stone Creamery. Ngokuhlwa ungalungiselela isidlo sangokuhlwa sosapho ekhitshini, uye kwenye yeendawo zokutyela kule ndawo, okanye uqhubele eMelbourne ukuze ufumane iindawo zokutyela zasekhaya kunye nobomi basebusuku.
Sivumela ukuhlala okubhetyebhetye ukusuka kwiintsuku eziyi-2 ukuya kwinyanga enye; siyazamkela iintsapho, amaqela abahlobo kunye neendawo zokuphumla zenkampani. Izilwanyana zasekhaya zamkelekile.
Ukutshaya akuvumelekanga ngaphakathi endlwini.
Sivumela ukuhlala okubhetyebhetye ukusuka kwiintsuku eziyi-2 ukuya kwinyanga enye; siyazamkela iintsapho, amaqela abahlobo kunye neendawo zokuphumla zenkampani. Izilwanyana zasekha…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Indialantic